China Z68-splicing ogbo ọkụ n'èzí mbugharị par pikselụ mmetụta ọkụ rụpụta na Factory | Banyere
Z68-splicing ogbo ọkụ n'èzí mbugharị par pikselụ mmetụta ọkụ
Ihe omuma a nke a na-eme ka ikpo oku di n'èzí na-eme ka ihe ọkụkụ bụ obere ọkụ na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ịme ka onye ọ bụla mepụtara ihe ọ bụla. Ngwunye ọ bụla na-abịa na 8x60watt LED, 4in1 (RGBW), enwere ike ijikwa ya site na DMX ma ọ bụ RDM protocol. Ihe na-ekewapụ ihe ndozi a na ngwaahịa ndị ọzọ yiri ya bụ ikike ibugharị na akpaghị aka. Ọ bụ ezie na ngwaahịa ndị ọzọ nwere akara ọkụ kwụ ọtọ, Z68 anyị nwere mbugharị akpaka site na 3.5º-40º ma bụrụkwa (IP-65) akara na mpụga. Ọ na-abịarute na ntanye mkpọchi nke nwere ike isonye n'ọtụtụ ihe jikọrọ ọnụ iji mepụta ọtụtụ njikọ dị iche iche dịka grid blinder, kwụ ọtọ / kwụ ọtọ ka ị na-enye ikike onye ọrụ pixel njikwa. Nke a na - eme ka ọ bụrụ ngwaahịa bara ụba enwere ike iji mee ihe dị ka mkpuchi, strobe, mmanya ma ọ bụ akara ngosi pixel. Egbu, ya kọmpat size na jupụtara na nkume na-ewu na-enye ohere Z68 ga-eji dị nnọọ n'ebe ọ bụla. Nakwa nabata ya na etiti eku.
Splicing ogbo ọkụ n'èzí mbugharị par pikselụ mmetụta ọkụ
Otu akara igbe nwere ike ịchịkwa na 8 unit par ìhè, n'akụkụ anọ nwere ike mfe spliclic, nwere ike ikpokọta ike a dịgasị iche iche nke shapes na ogbo. Nakwa ịnabata ọkụ ọkụ kọmpụta dị ka n'okpuru foto atụ. Nhazi nhazi bụ igbe njikwa 1 + ọkụ 8 + njikọta na eriri.
Isi mmalite 60W RGBW 4-in-1 ikanam Ngosipụta 180 Celsius reversible 2,4-anụ ọhịa LCD agba ngosi (Chinese ma ọ bụ Bekee)
Doo n'akuku 3.5 Celsius - 40 Celsius Data In / Out oghere ihe nkwụnye XLR 5-pin (24V ike + akara mgbaàmà)
Oriri Ike 550W Ogwe Ike PowerCon n'ime / apụ 3 pin
Njikwa Iwu Nchedo IP65
Modkpụrụ Njikwa DMX512 / mater-Slave / Auto Run / Music / Manual / RDM Specification
Ọnọdụ DMX 23/28/42/50 Ọwa
Njirimara Ọkọlọtọ ngwugwu: katọn; Ọnọdụ ụgbọ elu na nhọrọ
1> Ikanam otu njikwa Single ada size: 181x140x140mm
2> Otu igbe nchịkwa (ọ bụghị mmiri na-adịghị mmiri) na-achịkwa eriri asatọ maka ilekwasị anya, nke nwere ike jikọọ nkeji 4 n'usoro na 230V (ọkụ 32PCS), na nkeji 2 na usoro na 120V (ọkụ 16pcs). Single duru arọ: 1.88kgs
Njikwa otu njikwa, mbugharị mbugharị, njikwa ArtNet, enweghị ngwụcha Pan na ntụgharị ihu. Onye na-alụbeghị di ma ọ bụ nwunye na-ebu ibu: 2.44kg
3> Akara igbe (ọ bụghị mmiri na-ekpuchi mmiri) na-achịkwa isi 60W4in1 na-anwụ anwụ na-elekwasị anya na mmiri na-enweghị mmiri, na-akwado njikwa akara, Enwere ike itinye ya iche iche site na ndị na-akwụ ụgwọ, enwere ike ịgbakọta n'ọtụtụ Igbe njikwa ibu: 2.59kgs
4> Nchịkwa akara bụ eriri silicone 3M ogologo, na njikọ njikọ mmiri nke 5-Seetronic (eriri na-ejikọta ihe njide oriọna na igbe njikwa) Asambodo
5> High-arụmọrụ ngwa anya usoro, Super doo mmetụta plus mbugharị OA, ROHS
Q: manybọchị ole na-ewekarị ụgbọ mmiri?
Re: Ọ dabere na ụzọ mbufe, site na nkwupụta ọnụ ụzọ ruo n'ọnụ ụzọ na-ewekarị ụbọchị ọrụ 3-7; Site na ikuku na-ewerekarị ụbọchị 5-7; Site n'oké osimiri na-adabere na mpaghara na anya, ma e wezụga Asia, na-ewekarị ụbọchị 25-40.
Q: Kedu ụzọ ịkwụ ụgwọ anyị nwere ike ịhọrọ ịnyefe gị ego gị?
Re: ụlọ akụ TT ma ọ bụ Western Union.
Q: Kedu ka m ga-esi soro ngwongwo m mgbe m zigara gị nkwụnye ego?
Re: N'oge mmepụta, anyị ga-ezitere gị foto ma ọ bụ vidiyo iji gosi otu ha si arụ ọrụ na ogbako, ma zitere gị foto tupu ịbuga, wee nye gị nsuso Mba mgbe ezitere.
Osote: F800-9 * 60w doo na-asa mmanya na-akpụ akpụ ọkụ na pixel akara
1940-19 * 40W nnukwu anu anya na-akpụ akpụ isi na mbugharị a ...
660-6 * 60W pikselụ akara doo mbugharị mmanya na-akpụ akpụ h ...